Umyalezo wezokhenketho kwii-Cook Islands: Bhukisha kwangethuba!
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba eziziiNdaba zokuHamba » Umyalezo wezokhenketho kwii-Cook Islands: Bhukisha kwangethuba!
Iindaba zeManyano • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba eziPhuliweyo zaseCook Islands • iindaba • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel
Khuthaza abathengi ukuba babhukishe iiholide zabo zaseCook Islands kwangaphambi kwexesha. Lowo ngumyalezo ophambili ovela kuKhenketho lweZiqithi zeCook njengoko ulungiselela owona mcimbi wokurhweba kukhenketho lukhulu eAuckland ngaphezulu kweminyaka emibini.
URachel Mackey, umphathi wentengiso iNew Zealand kunye neCook Islands Tourism Corporation, uthi umbutho uzama ukufundisa abathengi ngesidingo sokubhukisha kwangethuba. 'Umyalezo wethu kumthengi kukuba ukuba bafuna ukufumana indawo yokuhlala abayifunayo, ngemihla abayifunayo, kunye nexabiso abazimisele ukulihlawula, ukubhukisha kufuneka kube kwiinyanga ezintandathu ubuncinci kwangaphambili. Ngamaxesha eeholide zesikolo, kucetyiswa iinyanga ezili-12 kwangaphambili. '
Uthando iRaro encinci kunye neAitutaki-Uhlaziyo loMmeli wezohambo lubanjelwe eHilton Auckland nge-29 ka-Agasti ukusukela nge-6 ngokuhlwa. Iya kwandulelwa ngumsitho okhethekileyo wokukhuthaza kunye nabaququzeleli bemisitho. Phakathi kwababonisi iya kuba yindawo entsha i-Moana Sands Lagoon Resort eRarotonga. Indawo yokuphumla entsha inamagumbi angama-24 (22 e-deluxe lagoon studios kunye namachibi amabini).
Indawo ephambili yendawo yokuphumla yindawo enkulu yokubhukuda yamanzi anetyuwa, igcwaliswe ngomgangatho welanga kunye nendawo yokubhukuda.